Burmese (my) - Documentation for Mozilla localizers
Microsoft key terms and target languages  https://www.microsoft.com/Language/
If there are two acceptable scripts commonly used by the general public, what is the commonly used script on the web or government sites?  What is the script used by major web technology companies?
1). Fully spelled out 2).2or3letters  3). Single letter
Is Lunar calendar observed?  Other regional calendar observed?
How are numerals and percentages expressed in your language? ​ Example: 1.23 (decimal separator) or 1,000 (thousand separator) using comma or period.
What is the format in your language? ​ Example: most Asian countries start from big to small: [Country] [postal code][state/province][city][district][street number and name][building and suite numbers][addressee] ​ Countries of European languages start from small to big: [addressee][street number and name][building and suite numbers][district][city][state/province][postal code][Country]
How are abbreviations expressed in your language? ​ Example, in English, abbreviations are made by removing most vowels and only using the first 3-5 consonants followed byaperiod (e.g., abbreviation = abbr.). (see: https://en.wikipedia.org/wiki/Abbreviation)
Do you use different punctuation rules in your Firefox localization than what your language standard defines? ​ Example: do you useaperiod at the end of every user interface element translation or only some? What is the international/national standard for punctuation in your language?
How does your language handle the use of bold, italic, or underline types to express emphasis?  ( See: https://en.wikipedia.org/wiki/Italic_type )
Mozilla ထုတ်ကုန်များ ဘာသာပြန်ရာတွင် အောက်ပါ အချက်အလက်များကို ကြိုတင်သိရှိ ထားခြင်းသည် ဘာသာပြန်ခြင်း ကို ပိုမို တိကျစေပြီး လျှင်မြန်လွယ်ကူစေပြီး ​ထုတ်ကုန်များ၏ သုံးဆွဲခြင်းအား ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသည်။
[ _ , -’;`!] Punctuation ပုဒ်ဖြတ်ပုဒ်ရပ်။ ။စာတစ်ကြာင်းတွင် ပုဒ်ဖြတ်ပုဒ်ရပ်များ ပါနေပါက သင့်လျော်သော ဗမာစာ ပုဒ်ဖြတ်ရှိပါက အသုံးပြုနိုင်ပြီး မရှိပါက ၎င်းမူရင်း ပုဒ်ဖြတ် ပုဒ်ရပ်ကို ပြန်လည်ကူးယူနိုင်ပါသည်
[ <a href="%(link)s"></a> ] XML Tags။ ။ စာကြောင်းအား ဘာသာပြန်ဆိုပြီးပါ က ၎င်းတို့အား သင့်လျော်သော အချက်အလက်အား ဝန်းရံ ကူးယူပေးပါ၊ XML tags အများစုသည် ဝက်ဘ် ပေါ်သို့ အခြား တစ်နေရာသို့ ခေါ်ဆောင်သွားလေ့ရှိပြီး ဝန်းရံခံရသော စာစုသည် ၎င်းသယ်ဆောင်သွားမည့်နေရာ အကြောင်းသို့ ဆီလျော်သော စာစု ဖြစ်ရမည်။
[ FQA ] စာလုံးအကြီး စကားစုများ။ ။ ၎င်းတို့သည် အများအားဖြင့် အရေးကြီးသော ဘုံအသုံးအနှုန်းများ ဖြစ်သည့် အပြင် အတိုကောက်များ လည်း ဖြစ်သည့် အတွက် ဘာသာမပြန်ဆိုပဲ ပြန်လည် ကူးယူပေးသင့်ပါတယ်။
၁။ အနက်ပြန်သောကိစ္စ၌ မြန်မာလို ပြောဆိုရိုးဖြစ်သော စကားရှိလျှင် ထိုစကားမျိုးကို သုံးသင့်သည်။
၂။ မျိုးခြား ဝေါဟာရတခုအတွက် မြန်မာဝေါဟာရတခုကို ပြုရာတွင် ထိုမျိုးခြားဝေါဟာရ၏ အဓိပ္ပါယ်တို့ကို အစုံပါစေလိုသော ဆန္ဒဖြင့် ပြုသောအခါ တခါတရံ မြန်မာမဆံခြင်း သော်လည်းကောင်း၊ ဆို၍ မကောင်းခြင်း သော်လည်းကောင်း ဖြစ်တန်ရာသည်။ ထိုအခါမျိုးတွင် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သော အဓိပ္ပါယ် တစ်ခု နှစ်ခုလောက်ကို သင့်တော်အောင် ပေါင်းစပ်၍ မြန်မာဝေါဟာရ ပြုသင့်သည်။
(နောင်တနေ့တွင် ဝေါဟာရအဘိဓါန် စီရင်နိုင်လာသောအခါ ထိုစကားမျိုးအတွက် အသေးစိတ် အနက်ဖွင့်ရန် လိုပါလိမ့်မည်။)
၃။ အနက်ပြန် ဝေါဟာရတခုသည် သုံးရိုးစွဲရိုးဖြစ်၍ ထိုဝေါဟာရကို လက်ခံခဲ့ကြပြီးဖြစ်လျှင် လက်ခံခဲ့ကြသည့်အတိုင်း ထားရှိသင့်သည်။ သို့ရာတွင် ခြွင်းချက်လည်း ရှိသင့်သည်။
၄။ အသံလှယ်ရာ၌ သာမန်အားဖြင့် အင်္ဂလိပ်အသံထွက်ကို လှယ်သင့်ပါသည်။ (Daniel Jones ၏ English Pronouncing Dictionary ကို သုံးသင့်သည်။) သို့ရာတွင် ခြွင်းချက်လည်း ရှိသင့်သည်။
၅။ မြန်မာ့နှုတ် အာလျှာတို့ဖြင့် ဆို၍ ကောင်းအောင် သို့မဟုတ် မြန်မာ့နားဖြင့် ကြား၍ ကောင်းအောင် အသံလှယ်သင့်သည်။
၆။ သာမန်အားဖြင့် မျိုးခြားဝေါဟာရရှိ အဆုံးသတ်အသံအတိုင်း အသံလှယ်သင့်သည်။ သို့ရာတွင် အသံထွက်တူ၍ အနက်ကွဲပြားနေလျှင် ကွဲပြားချက်ထင်ရှားအောင် ပြုပြင်သင့်သည်။
၇။ အသံလှယ် ဝေါဟာရတခုသည် သုံးရိုးစွဲရိုးဖြစ်၍ ထိုဝေါဟာရကို လက်ခံခဲ့ကြပြီးဖြစ်လျှင် လက်ခံခဲ့ကြသည့်အတိုင်း ထားရှိသင့်သည်။ သို့ရာတွင် ခြွင်းချက်လည်း ရှိသင့်သည်။
၈။ ဝေါဟာရသည် သိလွယ်သော ဝေါဟာရ ဖြစ်သင့်သည်။ ကြားရုံမျှဖြင့် နားလည်သင့်သည်။
၉။ သင့်တော်သည် ထင်မြင်လျှင် အရပ်သုံးစကားကိုပင် လက်ခံသင့်သည်။
၁၀။ မျိုးခြားဝေါဟာရတခု၌ ပညာရပ်ကိုလိုက်၍ အဓိပ္ပါယ်တမျိုးစီ ရှိနေလျှင်
(က) ပညာရပ်အလိုက် အဓိပ္ပါယ်ထွက်သော မြန်မာဝေါဟာရ တမျိုးစီ ရှိသင့်သည်။ သို့မဟုတ်
(ခ) အသံလှယ်သင့်သည်။ သို့မဟုတ်
(ဂ) ထိုမျိုးခြားဝေါဟာရ ပေါ်ထွက်ရာဖြစ်သော အရင်းခံပညာရပ်အလိုက် အနက်ပြန်၍ ဝေါဟာရပြုသင့်သည်။
၁၁။ မျိုးခြားဝေါဟာရတခုအတွက် မြန်မာပြန် ဝေါဟာရနှင့် ပါဠိဝေါဟာရရှိနေလျှင် သာမန်အားဖြင့် မြန်မာဝေါဟာရကို ယူသင့်သည်။ မလွှဲမရှောင်မှသာလျှင် အသိလွယ်သော ပါဠိဝေါဟာရကို လက်ခံသင့်သည်။
၁၂။ မျိုးခြားဝေါဟာရတခုအတွက် အနက်ပြန်ဝေါဟာရသော်လည်းကောင်း၊ အသံလှယ် ဝေါဟာရသော်လည်းကောင်း တခုလုံးထက် ပို၍ရှိနေလျှင် အသင့်တော်ဆုံးဟု ထင်ရသော တလုံးကို သာမန်အားဖြင့် ရွေးချယ်သင့်သည်။ သို့ရာတွင် လုံလောက်သော အကြောင်းရှိလျှင် ခြွင်းချက်လည်း ရှိသင့်သည်။
ဝေါဟာရဟူသည် နာမပညတ်မျှသာဖြစ်ရာ နာမပညတ်ကို ကြားသိရုံမျှဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ အဓိပ္ပါယ်အလုံးစုံကို သိနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ ယခုညှိပြီး ဝေါဟာရတို့သည် ပြီးပြည့်စုံပြီဟု မယူဆသင့်ပါ။ ထပ်မံပြုပြင်စရာ၊ ဖြည့်စွက်စရာတို့ ရှိနေဦးမည်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဤဝေါဟာရများကို သုံးသွားယင်း ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဝေါဟာရများတွေ့ခဲ့သော် တက္ကသိုလ် ဘာသာပြန်နှင့် စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးဌာနသို့ အကြံဉာဏ်ပေးပို့ကြရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။ ထိုသို့ ပေးပို့ကြသည့် အကြံဉာဏ်များအတိုင်း သင့်လျော်သလို ပြုပြင်ဖြည့်စွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ စင်စစ်မှာ ဝေါဟာရပြုစုရေးလုပ်ငန်းသည် အစဉ်တစိုက် ဆက်၍ လုပ်ရဦးမည့်လုပ်ငန်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ ဝိုင်းဝန်းပြုစုကြသည့် ပညာရှင်အားလုံးကို ကျေးဇူး ဥပကာရ တင်ပါကြောင်း